Maxaa ku dhaca addoonka, gumeystaha iyo cunsuriyadda awowgood awowg markii qof reer Negro ah uu dhunkado gabadha uu awoowga u yahay: Ayeeyo awoowe ma rumaysan karo indhihiisa; hallucinated, wuu wareersan yahay, oo wuxuu noqdaa casaan cadho; wuu iska neefsadaa in kasta oo uu isagu iska fudud yahay sababtoo ah Negro wuxuu soo qaatay gabadha uu awoowga u yahay "Honey One"
Maxaa ku dhaca addoonka, gumaystaha iyo cunsuriyadda awowgood awoowgood markii qof reer Negro ah uu dhunkado gabadha uu awoowga u yahay: awowgii hore ma rumaysan karo indhihiisa; hallucinated, wuu wareersan yahay, oo wuxuu noqdaa casaan cadho; wuu iska neefsadaa in kasta oo uu isagu iska fudud yahay sababtoo ah Negro wuxuu soo qaatay gabadha uu awoowga u yahay "Honey One"
Posted By: KongoLisolowaa: Sebtember 14, 2020 03: 03 No Comments
Daryeelaha hore, aad buu u xanaaqsan yahay, laakiin ma ciirsado, wuxuu eegaa tiisa ayeeyo u tahay Negro oo runtii si nidaamsan u raaxeysata "digaagga qoyan" ee ayeeyadeed. Wuxuu doonayaa inuu ku jajabiyo taleefanka halka uu ku eego sawirrada hadalka (...) Muxuu sameyn doonaa? Good. Halkan kaliya: "O ku meel gaar ah, o mores "," Waqtiyada kale, caadooyin kale, "ayuu yiri Latins. Waxyaabaha ayaa isbeddelay oo isbeddelay.
qurux badan awoowe hore:
Yaad ku dhiirrigelisay inuu addoonsiga galo?
Maxaad u gumaysatay Negroes-ka Afrika ??
Gumeysiga iyo addoonsiga waa inaan lagu sameyn dadka. Miyaad ilawday inaad kufsatay hooyooyinkeen iyo walaalaheena ??
Hadda waa marki laga soo tago neerfayaasha aad dulmiysay, mLaakiin uguyaraan iyagu kuma xadgudbaan, wax walbana waa lagula heshiiyey taada. Waxay ku raaxeysan doonaan gabdhaha aad ka soo farcantay ilaa 4ème jiilka sidii aad ugu baratay iyaga iyo kitaabkaaga quduuska ah.
Marka khamrigu jiido, waa in la cabo. Waxba yaan la qaban, hadda waa xilligii Neerfaha, iyaguna waa rag adiga oo kale ah. Ayeeyo aad u qurux badan: kaliya orso, waayo waxba ma beddeli kartid.
Adduun: laba jibbaar, laba tallaabo; maahan wax lagu dhaqo ama qoraal laga soo qaado filim Hollywood ah; runtii waa xaqiiqda dhabta ah, waa run oo waxay u dhacday si sax ah habkaas; sawirada fiidiyowgaan kujiro naftooda… (VIDEO)
Sep27 11: 39